कनिकाझैं बजेट छरिँदा ठोस काम हुन सकेको छैन -नगर प्रमुख मलासी
मगलवार, श्रावण २०, २०७७ ११:१३:२३
शुक्रवार, जेठ १०, २०७६ गोदावरी न्युज
मञ्जु मलासी प्रमुख, दिपायल सिलगढी नगरपालिका, डोटी
डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी नगर प्रमुख मञ्जु मलासी सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको ८८ वटा स्थानीय तहमा एक मात्रै महिला नगरप्रमुख हुन् । उनी विभिन्न चुनौती र समस्याका बाबजुद नगरपालिकालाई नमुनायोग्य बनाउने अभियानमा लागेकी छन् । वडावडामा पुगी जनचाहनाअनुसार काम गरेको बताउने मञ्जु मलासीसँग नगरपालिकाको समग्र विकास, भावी योजना र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रही राजधानीका भवनाथ प्याकुरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
० दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको समस्या र चुनौती के कस्ता रहेका छन् ?
– नगरपालिकाको आर्थिक स्रोत कम भएको हुनाले केन्द्र र प्रदेश सरकारको भर पर्नुपरेको छ । कर्मचारीको कमी हुनुका साथै हामीलाई क्षमतावान् कर्मचारीको आवश्यकता परेको छ । हिजोको ढड्डामा लेख्ने कर्मचारी अहिले आवश्यक छैन । अहिले प्राविधिक र काम जानेका वर्तमान आवस्थालाई बुझ्ने कर्मचारीको आवश्यकता रहेको छ । यो हाम्रो नगरपालिकाको मात्र समस्या भने होइन । हामीले कानुन निर्माण गर्दा बाधा अड्चनहरू रहेका छन् । त्यो कानुन कार्यन्वयन गर्दा समस्या आएको छ । विद्यालय समायोजन गर्ने क्रममा कानुन मान्दैनौं भन्ने विषय पनि आएका छन् । गोडा तान्ने प्रवृत्ति पनि आएको छ । कामलाई कसरी बिथोल्ने भन्ने कममा केही व्यक्ति लागेका छन् । तर, त्यसबाट म निराश भएको छैन ।
० नगरपालिकाको योजना कस्ता रहेका छन् ?
– २५ वर्षे गुरुयोजना पारित भइसकेको छ । कृषि, स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षा, पर्यटनजस्ता विषयहरू गुरुयोजनामा समावेश गरिएको छ । युवाहरू गाउँमै स्वरोजगारमा समावेश गरेका छौं । गुरुयोजनालाई टेकेर त्यसै योजनाअनुसार अगाडि बढिरहेका छौं ।
० केन्द्र सरकारले सहयोग गरेको छैन भन्ने सुनिन्छ नि ?
– केन्द्र सरकारको सहयोग उत्साहजनक तरिकाले पाइएको छैन । स्मार्ट सिटीका लागि केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारले कनिका छरेजसरी बजेट विभिन्न क्षेत्रमा छरेको छ । यसरी छर्दा काम प्रभावकारी भएको छैन । बजेट सक्ने रणनीतिअनुसार चाँडो काम गर्दा पनि समस्या आएको छ । त्यसका लागि समयमै बजेट दिनु आवश्यक छ । ठेक्का लिनेले काम ढिलो गरेको छ । यसले गर्दा उत्तरदायित्व वहन भएको छैन । समग्रमा बजेट सदुपयोग भएको छैन । हाम्रो जिम्मामा भएको बजेट सही तरिकाले सदुपयोग गरेका छौं । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा गएको भन्ने विषय गलत साबित भएको छ । अहिले पनि हामीले केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले गरिबमुखी बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले नारा लगाएअनुसार कार्यन्वयन गर्न आवश्यक छ । नारामा मात्र सीमित हुँदा जनविश्वास गुम्न सक्ने हुँदा यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।
० स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्दा समस्या आएको भन्ने छ, तपार्इंको नगरपालिकामा कस्तो रहेको छ ?
– शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका कानुन निर्माण गर्दा विभिन्न व्यक्तिको तर्कवितर्क हुँदा केही समस्या परेको छ । अहिलेसम्म २१ वटा कानुन बनेका छन् । हामीलाई कानुन बनाउँदा त्यति समस्या छैन ।
० जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सम्बन्ध तपाईंको नगरपालिकामा कस्तो रहेको छ ?
– हाम्रो नगरपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध राम्रै रहेको छ । कर्मचारीले काम गरे÷नगरेको निरीक्षण गर्ने काम मैले नै गर्नेगरेको छु । काम नगर्ने करारका कर्मचारीलाई हामीले निष्कासन पनि गरेका छौं । तर, समग्रमा उत्कृष्ट नै रहेको छ ।
० जनताको सहयोग कस्तो पाउनुभएको छ ?
– मैले जनताको सहयोग राम्रै पाएकी छु । मैले जनतालाई सोधेरै काम गरेकी छु । वडाले गर्ने काम पनि मैले नै गरेकी छु । वडाको आवश्यकता के भन्ने विषय पहिचान गरी काम गरेकी छु । वडाले कतै विभेद ग¥यो कि भनेर मैले अनुगमन गरेकी छु । जनतासँग मेरो घुलमिल छ ।
० जनताको बाचा पूरा गर्नुभएको छ ?
– चुनावमा लेखेका घोषणापत्र मसँग छ । त्यसलाई मैले पूरा गर्दै छु । तीमध्ये खानेपानी, पुल, सिँचाइ, विद्यालयको भवन, सोलारलगायत काम गरेकी छु । अन्य केही काम गर्न बाँकी छन् । त्यसलाई मेरो कार्यकालमा पूरा गर्छु ।
० त्यस क्षेत्रको आर्थिक स्रोतको सम्भावना के कस्तो रहेको छ ?
– सेती नदीमा ¥याफ्टिङ बनाएकी छु । धार्मिक पर्यटकको सम्भावना बोकेको खप्तड क्षेत्रको प्रवेशद्वार भएको हुनाले होटल, लज रिसोर्ट जस्ता सम्भावना रहेको छ । सिलगढीमा अवस्थित डोलेश्वर मन्दिर सुदूरपश्चिमकै प्रख्यात हो । त्यसबाट पनि आयआर्जन गर्न सकिन्छ । जैविक विविधतायुक्त हावापानी रहेको छ । आधा घण्टामा गर्मी र जाडो क्षेत्र पाइन्छ । हिल साइड स्टेसन बनाएर पर्यटन भि¥याउन सकिन्छ । कृषि, पशुपालन, चियाखेतीलगायतको सम्भावना रहेको चुनढुंगा प्रशोधन गरी उद्योगको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ ।
० विभिन्न स्थानीय क्षेत्रमा बजेट दुरुपयोग भएका समाचार आएका छन् । तपार्इंले बजेट कसरी परिचालन गर्नुभएको छ ?
– हामीलाई बजेट नै पुगेको छैन । हाम्रो बजेट दुरुपयोग भएको छैन ।
० त्यस नगरपालिकामा घरेलु श्रमिकको संख्या कस्तो रहेको छ ?
– अन्य क्षेत्रको तुलनामा कमै छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ । हामीले अध्ययन गरेर घर फर्काउन र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा र बस्ने व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरेका छौं ।
० नगरपालिकाले गरेका कामबारे बताइदिनुस् न ?
– नगरपालिकाले नगर बसको व्यवस्था गरेको छ । डिप बोरिङबाट शुद्ध खाने पानीको व्यवस्था गरेको छ । २१ वटा कानुनहरू बनिसकेका छन् । जसमा आर्थिक कानुन, बाल श्रमिक हटाउने कानुन, रणनीति र योजनाहरू मुख्य रहेका छन् । त्यस्तै पुरातŒव क्षंरक्षणका लागि डोटेली राजाको दरबार संरक्षण र पार्क निर्माणका लागि कार्य थालनी गरिएको छ । साक्षर नगरपालिका घोषणा गरिएको छ । सीप विकासमा महिलाहरूलाई हाते होजियारी (उनको कपडा बुन्ने) तालिम र मालापोते तथा सिलाइलगायत तालिम दिइएको छ । पाठेघर खसेका महिलालाई निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा शल्यक्रिया गरिने काम नगरपालिकाले गरेको छ ।
पर्यटन भिœयाउन सेती नदीमा ¥याफ्टिङ चलाइएको छ । बादी समुदायलाई जग्गा हस्तान्तरण र जिल्ला सदरमुकाममा रहेको खेलमैदानको स्तरोन्नति गरिएको छ । २५ वर्षीय गुरुयोजना निर्माण पनि मुख्य काम भएको छ । वडाहरूमा घरेलु हिंसाविरुद्धका अभियानजस्ता जनचेतनामूलक कर्यक्रमको सुरुआत गरिएको छ । आजसम्म मोटर बाटो पुग्न नसकेको ठाउँ जस्तै– कुन्जेडी तथा सिर्खोली सैनमा मोटरबाटो पु¥याएका छौं । यस्ता अन्य जनतासँग सरोकार रहेको विषयमा काम भएको छ ।
साभार - राजधानी दैनिक
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, जेठ १०, २०७६, ०२:०५:००
कञ्चनपुरमा चार दिनदेखि बेपत्ता भएका एक पुरुष मृत फेला मगलवार, श्रावण २०, २०७७ 50